Gal wadada gaadiidka - Trygg Trafikk
Gal wadada gaadiidka
Markan socono: Xaaladaha kala duwan ee jid-mareyaasha
Eriyo muhiim ah
Jidka iskuulka, baska iskuulka, qof lugaynaya, baaskeelad wate, xeerar, jidka halka dadku ka talaabaan, isgoys, girgirka waddada, jidka qaybta dadku maraan, koofiyadda baaskeelka, Maxdadda baska, jaakadda dhalaasha, laydh-ka gaadiidka kala haga, calaamad, dareewal, rakaab, suunka baabuurta, aaladda dhalaasha
- Xeerarka qaabka jidka loo maro
- Xeerarka qaabka jidka looga gudbo/talaabo
- Farqiga u dhexeeya kelida iyo wehelka marka jidka la marayo
Halkaa waxa mara jid-mareyaal( trafikanter ) badan. Ciyaalku iskuulka waxa ay ku tagaan qaabab kala geddisan.
Qaar waxa ay ku tagaan baabuur, qaar bas ayay u raacaan, qaar way u lugeeyaan halka qaar kalena ay baaskeel ku tagaan. Adigu iskuulka sidee ayaad ku tagtaa?
Haddii uu iskuulku kuu dhawyahay, waxa laga yaabaa in aad keligaa u lugaysid. Waxa muhiim ah in aad dooratid jidka aad hore u martay mar uu qofwayni kula socday. Dooro markasta waddada kuugu ammaanka badan, si fiicanna ula soco gaadiidka kugu hareeraysan. Waa maxay macnaheedu in isha lagu hayo gaadiidka?
Saaxiibadaa la lugee
Qaar waxa ay deggenyihiin meelo isu dhow, iskuukana way u wada lugeeyaan. Marka aad lugaysaan idinka oo badan, waxa laga yaabaa in aad ku mashquushaan waxyaalo kale oo aan ahayn lasocodka gaadiidka. Waxa muhiim ah in aad feejignaataan oo aad xasuusnaataan xeerarka waddo/jid marista inkasta oo aad sheekaysanaysaan oo aad baashaalaysaan.
La lugee qof wayn
Qaar badan waxa iskuulka u raaca qof wayn. Waxa laga yaabaa in uu iskuulka kuu raaco waalidkaa ama aad sii raacdid qof kale oo wayn oo wada ciyaal kale. Haddii aad la lugaysid qof wayn, waa in aad u muujisid tix-gelin, sidoo kalena feejignaatid.
Haddii aad baabuur raacdid, waa in aad suunka xidhatid. Marka aad baabuurka ka degaysid, waa in aan taxadirtaa oo aad hareeraha si fiican u fiirisaa. Dabadeedna albaabka iska furtaa oo aad u dhaqaaqdaa xagga waddada girgirkeeda ama qaybta dadku maraan. Ha u dhaqaaqin xagga gaadiidku marayo.
Kuwa iskuulka ka fogi, caadi ahaan waxa ay u raacaan bas. Waa muhiim in dhammaan si deggen loo fadhiyo si aan loo khalkhalin dareewalka. Haddi uu kursiga basku leeyahay suun, xidho suunka. Miyaad taqaanaa qaar iskuulka ku taga bas ama baabuur?
Ma taqaanaa qaar baaskeel ku taga iskuulka?. Waa la ogolyahay in baaskeelka la mariyo jidka qaybta dadku maraan, waddiiqada iyo jidka baaskeeladaha iyo weliba dhinaca midig jidka baabuurta. Sidaydoonto ha ahaatee, kuwa baaskeeladaha wataa waa in ay raacaan xeerka gaadiid-ka oo ay tix-gelin sii yaan jid-mareyaasha(trafikanter) kale.